အက်စတန်ဘူပွဲ သုံးသပ်ချက်များ နှင့် မန်ယူကစားသမားနှစ်ဦးအား ပေါစခိုးလ် ဝေဖန် – FBV SPORT NEWS
အက်စတန်ဘူပွဲ သုံးသပ်ချက်များ နှင့် မန်ယူကစားသမားနှစ်ဦးအား ပေါစခိုးလ် ဝေဖန်
November 6, 2020 By admin Sports News
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်အဖြစ် အက်စတန်ဘူနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းမှာ ကစားခဲ့ရပီး 2-1 ဖြင့် အရှုံးပွဲကို အာဆင်နယ်ကို ရှုံးပြီး ဆက်တိုက်ရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့ရပြီး ကစားသမားတွေနဲ့ နည်းပြဟာလည်း ပရိတ်သတ်များနဲ့ အားကစားပညာရှင်တွေကြား ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တင့်ခဲ့ပါတယ်…….
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ ဒီပွဲဟာ ဆိုးရှားလ် ရဲ့ တိုက်စစ်ကိုအသာပေးတဲ့ ကစားကွက်နဲ့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်….ပထမဆုံးမှာပွဲက တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ အဆုံးသတ်ဂိုးသွင်းသေချာတဲ့ ကစားသမားလိုအပ်နေတာရယ် ကစားသမားတွေက အင်တိုက်အားတိုက်မကစားတာရယ်ကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်….
ပေါစခိုးလ်က ” မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် က ဘာတွေပြောင်းလဲလာပြီလဲ မေးတယ်နော် ဘာမှမပြောင်းလဲသေးပါဘူး…..အရင်အတိုင်းကစားသမားတွေက နည်းပြကို အပြစ်တင်မယ် ပရိတ်သတ်တွေက နည်းပြကိုအပြစ်တင်မယ်ဒါတွေနဲ့ ထပ်နေပါသေးတယ်…လက်ရှိ ဘာတွေလိုနေလဲဆိုတာကို အရင်တည်းက ပြောပြဖူးတယ်…ဒီလိုအရှုံးတွေ ကျနော်တို့လည်း ကြုံခဲ့ဖူးတယ် ရုန်းထနိုင်ခဲ့တယ်..အင်တိုက်အားတိုက် ကစားခဲ့တယ်..ပေးဆပ်မှုတွေကွာတာပေါ့
နောက်ပြီးတော့ အက်စတန်ဘူပွဲကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဂိုး ဟာ တကယ်ဆို ကစားသမားတွေပေ့ါလျော့ခဲ့တာ ဂိုးရဖို့တိုက်စစ်ကိုအားသန်နေတယ်….နောက်မှာ ဘာဖြစ်နေလဲသူတို့ဂရုမစိုက်ဘူး Target လည်းပျောက်နေကြတယ်…ဥပမာ ရွန်းနီကိုဘဲ ကြည့်ပါ ရော်နယ်ဒို ထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်း သူဟာ အသင်းအတွက်ပွဲတိုင်းနီးပါး တကွင်းလုံးပတ်ကစားခဲ့တယ် သူ့ရုန်းအားကိုပြောချင်တာပါ နောက်ပြီး တသင်းလုံးဟာ တိုက်စစ်ကို ဖာဒီနန် ဗီဒစ်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်….အဆင်းလည်းမြန်တယ် …အခု မန်ယူကစားသမားတွေက နောက်တန်းတောင် ဘောလုံးဆင်းမတောင်းဘူး…..မဖြစ်သင့်ဘူး…..
ပထမဂိုးရဲ့ အပြစ်တင်ရမယ့်လူတွေက မက်ကွိုင်းယား မာတစ် ဒီနှစ်ယောက်ဘဲ တိုက်စစ်လိုက်နေပြီးတော့ နောက်တန်းဘာလို့ပြန်မဆင်းလဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆင်းလာသင့်တာ နောက်ပြီးတော့ ကစားတွေဟာ ဘောလုံးကိုကြောက်နေသလိုဘဲ ကိုင်မဆော့နိုင်ကြဘူး…လူချင်းထပ်နေတယ် နောက်တန်းနဲ့ဂိုးသမားကို ပြန်ပေးတယ်……အဓိက လိုအပ်ချက်တွေကတော့ ကွင်းလယ်မှာ မာကျောနေတဲ့လူတွေ မရှိသေးဘူး တောင်ပံတိုက်စစ်တွေ ကျိုးနေတယ် ဒါကတော့ ကစားသမားခေါ်ယူပေးမှုနဲ့ ဆိုင်သွားပြီ …
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက မြည်းတွေလို ဆက်ကစားပြီး ဖာဂူဆန်ရဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကို ကျော်ပြီးတော့ ကစားကွက်တွေ ချိန်းနေသရွေ့ မန်ယူ မထနိုင်သေးဘူး……ဟု Sport Tribble News မှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်…..
အုပ်စုတွင်း တပွဲမှ ဂိုးမရတဲ့အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ မန်ယူရဲ့ ထောက်ပြစရာအားနည်းချက်များ
ဖာဒီနန်ပြောသော အဲဗာတန်နဲ့ ပွဲက မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ ဘယ်သူလဲ